Benzema oo ka warbixiyay fikirkiisa ku aadan dhibaatooyinka heysta Real Madrid xilli ciyaareedkan – Gool FM
Benzema oo ka warbixiyay fikirkiisa ku aadan dhibaatooyinka heysta Real Madrid xilli ciyaareedkan
(Madrid) 10 Feb 2021. Weeraryahanka Real Madrid ee Karim Benzema ayaa sheegay in dhibaatooyinka ku hareereysan Los Blancos ay tahay arrin dabiici ah, sababa la xiriira inay tahay kooxda ugu fiican adduunka.
Dhinaca kale Karim Benzema ayaa si cad u sheegay in fursada ay kooxdiisa Real Madrid u heysato hanashada horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan ay wali furan tahy.
Real Madrid ayaa saddexda dhibcood ka qaadatay kooxda Getafe oo marti ugu aheyd garoonka Alfredo Di Stefano, kaddib markii ay kaga adkaatay 2-0, kulan qeyb ka ahaa horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Ciyaarta kaddib, weeraryahanka reer France ee Karim Benzema ayaa yiri:
“Waxaan dhaliyay gool aad u fiican, wuxuu ahaa karoos fiican oo ka yimid Vinicius Jr, waxaana awooday inaan ku jiro booska saxda ah si aan u toogto.”
“Waxaan ku ciyaarnay kulankii maanta kalsooni weyn waxaana ku guuleysanay inaan ka adkaano Getafe.”
“Ma ahan inaan sugno inta ay Atletico Madrid guuldarreysaneyso, waa inaan diirada saarnaa oo aan u ciyaarnaa kulan kasta si gaar ah.”
“Wali waxaa jira kulamo badan ilaa dhamaadka Horyaalka Spain, ciyaar kasta waa inoo final, waxaan isku dayi doonaa inaan guuleysano dhamaan kulamamda harsan.”
“Waxaan sii wadi doonaa inaan ka shaqeeyo sidii aan ku caawin lahaa asxaabteyda, tani waa kubadda cagta waana inaan ku sii socono wadadan, waxaan isku dayi doonaa inaanan dhibco iska luminin oo aan badino dhamaan kulamada.”
Conte oo weerar ku qaaday madaxweynaha kooxda Juventus kaddib markii ay ka hareen Coppa Italia
Mourinho oo ka falceliyay wararka xanta ah ee la xiriira in Harry Kane uu ka tagayo Tottenham